UTruter uthi akukajiki lutho ngabekelwe ukukuzuza kwiSwallows kule sizini - Impempe
UTruter uthi akukajiki lutho ngabekelwe ukukuzuza kwiSwallows kule sizini
ISwallows FC isethubeni elihle lokugxumela eqhulwini kwiDStv Premiership uma ingawina uma seyidlala neChippa United ekhaya eDobsonville Stadium ngoLwesithathu ngo 5 ntambama. Kodwa lokhu akubonakali kuyinto ayifake ekhanda umqeqeshi waleli qembu laseSoweto, uBrandon Truter oqokwe njengovelele yiPremier Soceer League ngezinyanga ezihlanganisa uDisemba noJanuwari.
UTruter ugidlabezwe ngale ndodo yoMqeqeshi oVelele kanye nomgadli wakhe, uRuzaigh Gamaldien othole eyokuba nguMdlali oVelele ngesikhathi esifanayo, ngoLwesibili ntambama emahhovisi ePSL.
“Kulabo abebengasethembi, qhubekani ningasethembi,” usho kanje uTruter ngemuva kokwamukela le ndondo.
“ISwallows ayiqali ukuba kulesi sigaba futhi isazoqhubeka ibe khona. Sizozama ukubamba lo mgqigqo. Kodwa ingcindezi ikwiSundowns, SuperSport (United), namanye amaqembu amakhulu, hhayi kithi,” uchaze kanje lo mqeqeshi oneminyaka engu-43.
Yize iDube Birds yenza kahle futhi ibukeka seyikwazile ukuqoqa amaphuzu anikeza ithemba lokuthi izokwazi ukungangeni enkingeni yokuvika izembe, futhi ingase iqede ingaphakathi emaqenjini ayisishiyagalombili aphezulu, kodwa uTruter uthi akukajiki lutho futhi ngeke baziphithanise amakhanda ngokufuna okungaphezulu kwalokho ababezibekele khona kuqala isizini.
“Cha, ukukhuluma iqiniso elimsulwa nje, ebesizibekele ukukwenza akukajiki. Kusukela ngigcina ukukhuluma kuze kube manje, akukho okujikile. Ngisho nendlela abona ngayo usihlalo (uDavid Mogashoa), akukho okujikile ngoba akukho ngcindezi yokujaha ezinye izinto ebesingazihlelanga,” kuchaza uTruter.
UGamaldien yena uthe umdlalo wabo neChilli Boys – nayo ehambela phezulu ngemuva kokuwina okokuqala ngaphansi kukaDan Malesela ngempelasonto – ubalulekile ngoba bazobe besekhaya.
“Ya, umdlalo wethu. Kodwa okubalulekile kithi wumphumela. Ngemuva kwalokho sesingabheka ekutheni yikuphi ebesingakwenza kangcono,” kuchaza lo mgadli oneminyaka engu-31. UGamaldien useshaye amagoli ayisishiyagalombili, kamti usilele emuva ngamabili kuBradley Grobler weSuperSport United okunguyena ohamba phambili njengamanje ngamagoli ayishumi.
Previous Previous post: Ubona ubungozi kwiPirates ebuya esibhaxwini esinzima uNcikazi we-Arrows
Next Next post: Ufuna AmaZulu estikini umgadli weSuperSport ovuthayo kulezi zinsuku